Amanyathelo okuya kwinkululeko yamatyala eMzantsi Afrika
Amanyathelo a-5 olula ukulunga nokuzonwabisa
Gcwalisa ifom yesicelo sakho
Ukuba awuzigcwalisanga isicelo sakho (iFom 16) awunakukhuselwa. Uya kudinga: Uluhlu lwababolekisi bakho, ikopi ye-ID yakho, Isiliphu somvuzo samva nje, iingxelo zomntu obolekayo ngoku, kwiingxelo ezintathu zebhanki, ubungqina bobuhlali, Nawaphi na amaxwebhu asemthethweni asuka kwababolekisi.
Abababolekisi bakho bayaziswa
Ukhuselekile kwisenzo esisemthethweni. Qala ukuhlawula ukuncitshiswa, ukubhatalwa okwethutyana kunye nomvuzo wakho olandelayo wokurhola. Umcebisi kuMatyala eMboleko wakho uyakujonga uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwaye abale ukubala okuncitshisiweyo, ukubonelelwa ngesixa, ngemali eyaneleyo kwiindleko zakho zokuphila. Umcebisi kuMatyala eMboleko uyakuthi azise abo ubatyala imali ukuba ubunyulile ukuba ucebise ngetyala kwaye ziya kufakwa iibhalansi zakho zomntu obolekayo.
Isicwangciso sokuhlawula amatyala silungiselelwe
Qhubeka ubhatale intlawulo yakho ehlisiweyo, yokubambisa inyanga nenyanga. Ukubuyiswa kwamatyala okuqala sisicwangciso sethutyana, esithunyelwa kubabolekisi bakho. Oku kuthintela iingxaki ezingafunekiyo kwaye kubonisa ukuba uzinikele ekuphumeni ematyaleni.
Qhubeka nokuhlawulwa kwentlawulo yethutyana, kude kube ucwangciso lwakho luyilwe kwakhona. Emva koko uMcebisi kuMatyala eMboleko uya kunxibelelana nawe ukuba uhlawule imali eyakhiwe ngokutsha. Siza kuthetha-thethana nababolekisi egameni lakho ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sokuhlawula esifanelekileyo, esinamaxabiso afikelelekayo kuyavunyelwana ngaso. Isekwe kuthethwano olwenziweyo , uMcebisi wakho wamatyala unokufuna ukwenza isicwangciso kwakhona.
Isicelo sesicwangciso sokubuyisa kufuneka senziwe kwinkundla
Nje ukuba ukhutshwe umyalelo wenkundla, usendleleni eya kwikamva elinengxaki loxinzelelo lwezezimali. Kwenziwa isicelo sokuba isiCwangciso sokuBuyiswa kwaMatyala kugqitywe senziwe isicelo senkundla. Ingummeli wezomthetho oyingcali inakho ukumela umcimbi enkundleni.
Gcina imali ngoku
Ngaba uyafuna ukuhlawula imali ephantsi?
Sikwalathisa kuhlolo lwamatyala, sikwazi ukuba nenze iintlawulo ezincinci eninokuzihlawula
Ubunini bePropathi R5 000 nge nyanga R4 250 nge nyanga R750
Imali Yezithuthi R3 000 nge nyanga R2 400 nge nyanga R600
Iiakhawunti zempahla R3 000 nge nyanga R1 500 nge nyanga R1 500
Mali mboleko R2 500 nge nyanga R1 250 nge nyanga R1 250
ZONKE R13 500 nge nyanga R9 400 nge nyanga R4 100
Ngaba ufuna ukubonisana ngokukhululekileyo nomcebisi ngetyala oqeqeshiweyo? Cofa iqhosha kwaye uqale uhambo lwakho kwinkululeko yamatyala. Lonke ulwazi lwakho luya kugcinwa luyimfihlo i-100%